China amadoda 2021 Ihowuliseyili Custom Custom uziphu ngokusebenzisa isweatshirt iseti oqhelekileyo isimbo semikhono emide epokothweni ukwenziwa kunye nefektri | IQela leMpahla
2021 Ihowuliseyili yesiko yamadoda uziphu ngokusebenzisa isweatshirt iseti Isitayile esiqhelekileyo Sleeve ende epokothweni
IGAMA LEMVELISO: Amadoda angama-2021 e-Wholesale Custom zipper ngokusebenzisa isweatshirt esetiweyo Isitayile esiqhelekileyo seSleeve ende epokothweni
INQAKU LENQAKU: MH2021006
IGAMA LEMVELISO 2021 Ihowuliseyili yesiko yamadoda uziphu ngokusebenzisa isweatshirt iseti Isitayile esiqhelekileyo Sleeve ende epokothweni
INQAKU LENQAKU MH2021006
UYILO IKHOTI YAKANGAROO, velcro isizibaEpokothweni emkhonweni uziphuIpokotho enomngxunya weefowuni
Izinto eziluncedo ngokukhetha inkampani yethu I-MOQ esezantsiIxabiso elikhuphisanayoUmsebenzi oqinisekileyoIsiqinisekiso SomgangathoIsityalo esinezixhobo ezifanelekileyo, ukusebenzisana okuqinileyo kunye nabasebenzi abanamava. Ixesha elifutshane lemveliso. Ukuhanjiswa okukhawulezayo. Kulungile emva kwenkonzo yokuthengisa
Ihempe yokubila kwezemidlalo ayisiyiqhekeza nje elifudumeleyo ekwindla nasebusika, kodwa ikwangumsebenzi oyimfuneko kubadlali bezemidlalo. Nokuba kungayiphi na kwezemidlalo, umsebenzi, ukhenketho, kunye nokudityaniswa kwetekhnoloji entsha yokushicilela, inokuqaqambisa umahluko weemveliso. Nokuba inxitywe yodwa okanye ngokudibeneyo, inokuba yinto ekugxilwe kuyo emehlweni, indawo eqaqambileyo esitratweni. Imibala imnyama namhlophe ingwevu, navy oluhlaza, obomvu, omnyama ngwevu, ngwevu ngombala, ngwevu ukukhanya Izinto eziphambili zihambisa i-concave convex, ukuprinta ipateni, ukukrola ifilimu, ukuprinta umbala wemilingo, ukucofa iglu, njl.Ngophuhliso lwamaxesha, ukufikelela kulwazi kuye kwaba lula ngakumbi, kwaye ubuhle babathengi nabo baphuculwe. Abantu abasenelisekanga ngumfanekiso wokomfuziselo, kodwa ngokuthe ngcembe bathambekele ekuboniseni iimvakalelo zangaphakathi, ngakumbi iipateni ezingaqhelekanga okanye iimilo. Ngamanye amaxesha asinakucacisa ukuba ngaba ibhloko yombala emfanekisweni yinto ethile, kodwa ayinakuphikwa ukuba ibhloko yombala emfanekisweni yinto ethile, Ezo milo zingaqhelekanga zinokuzisela abantu uvuyo, ulonwabo, uxolo kunye nezinye iimvakalelo, Kulula ukuzisa abantu kwiimvakalelo ezithile, kwaye kude kuvuselele inkumbulo yexesha elithile.Ukusuka kwizinto ezahlukeneyo ezilungiselelwe ngokupheleleyo, ezemidlalo kunye nomxholo wokuzonwabisa okumilo kunye nokucoceka kuphuculwe. Imfashini, isiphelo esiphezulu, ubhetyebhetye, ezemidlalo kunye nexesha lokuphola 2.0 liphuculwe kwimpahla yanamhlanje. Phinda uhlaziye iimpahla zokuzonwabisa ezintle, kwaye udibanise imodeli kunye nokusebenza kwenqanaba lokusebenza. Isitayile esithandekayo nesilula sineempawu ezenziwe ngesandla kunye neendwangu ezenziwe ngesandla, ezifanelekileyo indawo yokuzivocavoca, iofisi, ibha kunye nezinye izihlandlo. Kubomi banamhlanje obuxakekileyo, buzisa ubumnandi kunye nolonwabo kubathengi. Uyilo lwesitayile yinto yokuqala yoyilo lwefashoni, ekufuneka ingathatheli ingqalelo kuphela umlinganiso kunye nokuziphatha kwalowo unxibileyo, kodwa kunye nokunxibelelana nomzimba womntu. Siqhutywa ngumbono wokulula, sincama umhombiso odinisayo kunye nokudibana okungafunekiyo. Gxila kulwakhiwo lwangaphakathi lwempahla kunye nolungelelwaniso lomgca wokwahlula.
Egqithileyo Ihowuliseyili ekwindla esemgangathweni ophezulu kunye noMdaka waBantu oMdaka weMidlalo eHooded Sweatshirt
Okulandelayo: Abafazi abaNxibileyo abaNxiba ngokuNxibileyo kwiimpahla zeLadies ezishicilelweyo zeentyatyambo